Abakhiqizi nabathengisi beSmCo Magnet bebanga 35 | Ukufika
Uzibuthe weSmCo webanga lama-35 noma ibanga lama-35 Samarium Cobalt uzibuthe njengamanje uyibuthe elinamandla kunazo zonke iSamarium Cobalt emakethe. Kuyinto ekhethekile ephezulu ye-SmCo enikezela ngomkhiqizo ophakeme wamandla, ukumelana nokugqwala, ukusimama okuhle kakhulu kwezinga lokushisa nokumelana nokushisa kwe-demagnetization.
Esikhathini esedlule, ibanga 30 noma 32 kwaba eliphakeme kakhulu Samarium Cobalt grade ukuthi cishe bonke China SmCo uzibuthe abaphakeli babekwazi ukunikezela. Ibanga lama-35 iSamarium Cobalt laliphethwe ezinye izinkampani zase-US, njengo-Arnold (Arnold Magnetic Technologies, grade RECOMA 35E), EEC (Electron Energy Corporation, 34 grade SmCo). IHorizon Magnetics ingenye yezinkampani ezimbalwa zikazibuthe ezinganikeza uzibuthe weSmCo webanga lama-35 ngobuningi obuningi ngeBr> 11.7 kGs, (BH) max> 33 MGOe neHcb> 10.8 kOe.
1. Amandla amaningi kepha isisindo esiphansi. Kwi-Samarium Cobalt, leli banga likhulisa ukuminyana kwamandla ukuze lilingane nezinye izinhlelo zokusebenza ezibucayi lapho usayizi omncane nokwenza ngcono ukusebenza kubaluleke kakhulu
2. Ukuzinza okuphezulu. Kuleli banga, i-BHmax, i-Hc ne-Br ingaphezulu kwamamaki aphezulu wangaphambilini wamagnet we-Sm2Co17 afana ne-32 grade, nokuqina kokushisa kanye nokushisa okuphezulu okusebenzayo kuba ngcono.
1. Ama-Motorsports: Kuma-motorsports, kuyinjongo enkulu ukuwina umncintiswano onamandla ngokusebenzisa ngokunenzuzo izinto zokwakha ezintsha ukukhulisa i-torque nokusheshisa ngephakeji elincane kakhulu futhi elizinzile kakhulu.
2.Ukufaka esikhundleni semagnethi asebenzayo aphezulu we-Neodymium: Esikhathini esiningi, intengo yeSamarium Cobalt ibiza kakhulu kunezibuthe ze-Neodymium, ngakho-ke uzibuthe weSamarium Cobalt usetshenziselwa ikakhulukazi izimakethe lapho uzibuthe we-Neodymium ungafaneleki ngokwanele ukuhlangabezana nemfuneko ebucayi. I-Dy esindayo engajwayelekile ye-Dy (Dysprosium) ne-Tb (Terbium) inendawo encane yokugcina emazweni anganiselwe kepha iyadingeka kumazibuthe aphezulu we-Neodymium afaka ibanga le-AH, i-EH noma i-UH, iningi lawo elisetshenziswa kuma-motors amaningi kagesi. Ngo-2011 kubonakale ukukhuphuka kobuhlanya kwentengo yomhlaba engajwayelekile. Lapho intengo yomhlaba engajwayelekile ikhuphuka, ibanga le-35 le-Samarium Cobalt, noma ibanga elingu-30 kungaba yinto engcono kakhulu yokuthola uzibuthe yabasebenzisi bakazibuthe ukuhlala izindleko ezizinzile kakhulu uma kuqhathaniswa nabancintisana nabo. Ngenxa yokuqina kokushisa, iBHmax yebanga lama-35 Samarium Cobalt iba ngcono kune-N42EH noma i-N38AH kazibuthe we-Neodymium emazingeni okushisa adlula i-150C degree.
Ukuqhathaniswa kweSmCo neNdFeB kumaZinga okushisa
Langaphambilini I-SmCo5 Magnet
Olandelayo: Ikhefu LaseMagnetic Langaphambili
Idiski yeSmCo Magnet
Samarium ayibe R ...
Unxande Samariu ...
SmCo Ingxenye Magnet